Enweghị ike igosipụta ụgbọ elu ahụ n'ụzọ ziri ezi
Enweghị ike igosipụta ụgbọ elu ahụ n'ụzọ ziri ezi 2 ọnwa 1 izu gara aga #1795
Ndewo nu ndi enyi,
M ebudatara livery nke ngwugwu maka A350 / A340 / A330 / A320 na A310. Ọ bụghị ihe niile kama ole na ole n’ime ụgbọ elu akpọrọ aha ka aga-egosipụta nke ọma. Imirikiti ụgbọ elu ndị ọzọ nwere nsogbu dị n'okpuru ebe a. Ọ bụrụ na ọ dị njọ na igosipụta otu ụgbọelu na ibe ọdịda, ụgbọ elu a ga-egosipụta nke adịghị mma yana n'ime egwuregwu.
Kedu otu esi elebara ọnọdụ a anya? Ejiri m faịlụ "EXE" site na weebụsaịtị a iji wụnye nke ọma.
Daalụ maka ndụmọdụ gị.
Ndumodu ikpe azu: site ttrdon. Reason: Explain a bit furher
Enweghị ike igosipụta ụgbọ elu ahụ n'ụzọ ziri ezi 2 ọnwa 1 izu gara aga #1796
Hichapụ ya ma nwaa ọzọ ..